သင်၏လျှောက်လွှာကိုတိုးတက်စေရန် APIs များကိုအာရုံစိုက်ပါ (Del.icio.us နှင့် Technorati) | Martech Zone
သောကြာနေ့, ဧပြီ 20, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
သင်ဤစာဖတ်သည့်အချိန်တွင်၎င်းကိုတည့်မတ်ပေးလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်သတိပြုမိလိမ့်မည် Technorati အဆင့်ကတော့ 0. ပါ။ Technorati ကြောင့်ဖြစ်သည် API ကို ခေါ်ဆိုမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ရာထူးကိုပြန်ပို့ခြင်းမဟုတ်ပါ (၎င်းသည်ပိတ်ထားသောဆုံမှတ်များကိုပြန်ပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ ) ) ။
အဖြစ်ကောင်းစွာ, Del.icio.us'' API ကို တက်သရုပ်ဆောင်နေသည်။ သင်သတ်မှတ်ထားသောအညွှန်းတစ်ခုအတွက်သင်တောင်းဆိုသောအခါအခြားနေ့တွင်မည်သည့်ပို့စ်များကိုမျှပြန်မပို့နိုင်သည့်ပြfixedနာကိုသူတို့ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ဒီကနေ့ tag ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်ပို့တာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ Daily Reads ကိုတင်ထားသောအလိုအလျောက်အလုပ်သည်မည်သည့်အခါကမျှတင်ပြခြင်းမရှိပါ။
ငါကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးနှင့်အတူတောင်းဆိုမှုများကိုထည့်သွင်းပါတယ်ဒါပေမယ့်ငါမတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးဟာကုမ္ပဏီကြီးတွေပါ။ ငါအရင်ကအကူအညီလိုအပ်တဲ့အခါငါ့ကိုတကယ်ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်။ ဤကုမ္ပဏီနှစ်ခုနှင့်မတူနိုင်သော်လည်းကုမ္ပဏီတော်တော်များများက၎င်းတို့ကိုဆက်ဆံကြသည် API ကို သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်လျှောက်လွှာတစ်ခုအလယ်တန်းအင်္ဂါရပ်အဖြစ်။
ဒါကမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာမင်းရဲ့စီးပွားရေးကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အမှားပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 'semantic' ဝဘ်ဆီသို့အရှိန်မြှင့်လာပြီး plugins, widgets, rss, custom pages များစသည်တို့ဖြင့် APIs သည် User Interfaces များထက်ပိုမိုအရေးပါလာလိမ့်မည်။ တစ် ဦး အတွက် ရောခြေသည် application, ငါအလှည့်အတွက်များစွာသော API များနှင့်ဆက်သွယ်သောဗဟိုဆာဗာကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ ငါက Mashup ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါကသူတို့စီးပွါးရေးကိုမလုပ်တဲ့စီးပွားရေးကိုလုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး API ကို gravement ။
ကြှနျုပျ၏ရိုးသားသောထငျမွငျခကျြအရဒါကသင်ခန်းစာပဲ Google အစောပိုင်းသင်ယူခဲ့တယ်။ သင်ဂူးဂဲလ်ကိုဂရုတစိုက်လေ့လာမယ်ဆိုရင်၊ သူတို့စျေးကွက်ထဲယူဆောင်လာသည့် application တစ်ခုစီသည်တတိယပါတီတီထွင်ကြံဆမှုကိုဖိတ်ခေါ်သည့်အားကောင်းသည့် APIs များရှိသည်။ ထို APIs များကိုတည်ဆောက်ထားသောစီးပွားရေးနှင့် application များစွာရှိသည်။
ထို့နောက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏တီထွင်ကြံဆမှုကိုထောက်ခံမည့်အစားကုမ္ပဏီအချို့သည်၎င်းတို့အားလုံးလုံးတိုက်ခိုက်ကြသည်။ Statsaholic သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်နာမတော်ကို Alexaholic မှပြောင်းရန်လိုသည်။ သင်တီထွင်ထားသောကိန်းဂဏန်းများကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်စိတ်ကူးကောင်းသော User Interface ကိုတစ်ယောက်ယောက်ကတည်ဆောက်သည်ဟုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သူတို့ဟာအဲဒီကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေကိုသုံးစွဲသူထောင်ပေါင်းများစွာ (သန်းချီ) ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားရုံမျှမက၊ သူတို့နှင့်သင်စိတ်ဆိုးလာလျှင်ဘယ်တော့မှမတည်ထောင်နိုင်ပါ။
ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Indianapolis စာအုပ်ကလပ်မှာကျနော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည် ကြယ်ငါးပွင့်နှင့်ပင့်ကူ - ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့အစည်းများမတားဆီးနိုင်သောစွမ်းအား။ ဤစာအုပ်၏အဓိကအချက်မှာ Spider သည်အပေါ်မှအောက်အဖွဲ့အစည်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဦး ခေါင်းကိုသတ်။ ကိုယ်ခန္ဓာသည်မရှင်သန်နိုင်ပါ။ Starfish ကိုဖြတ်တောက်ပါ။
Google Blogsearch Technorati မှစျေးကွက်ဝေစုရယူသည်။ ငါ Technorati ကိုနှစ်သက်တယ်။ အဲဒါနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာပိုလွယ်တယ်လို့ထင်နေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်နောက်ဘက်မှန်မှာ Google ကထရပ်ကားကြီးလို့ငြင်းစရာမလိုပါဘူး။ ယခုအပတ် Google က၎င်း၏ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် Ajax Feed API... ဒီ Technorati ကိုသူတို့အသိအမှတ်ပြုသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေနောက်ထပ်ကျူးကျော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ (၎င်းသည် Yahoo! ပိုက်များနှင့်လည်းယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။ )
APIs များဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်ခိုင်မာသည့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အခြားကုမ္ပဏီများအတွက်အထောက်အပံ့များသေချာစေရန်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်သူတို့၏တိုးတက်မှုကို ထပ်မံ၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်မည်သို့မည်ပုံသတိထားမိသည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ အားသာချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အသုံးပြုသူရဲ့တိုးတက်မှုနည်းတယ်၊ bug တွေနည်းတယ်၊ အထောက်အပံ့နည်းတယ်၊ bandwidth နည်းတယ် API ကို သင်၏ခေါ်ဆိုမှုသည်စာရွက်စာတမ်းထက်စာရင် ပို၍ နည်းပါသည်။ သင်၏စီးပွားရေးအပေါ်မူတည်သည်။ ဤသူတို့သည်သင်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်လိုခြင်း (သို့မဟုတ်) စိမ်းကားလိုသောသူများမဟုတ်ပါ၊ ဤအရာကိုသင်လက်ခံချင်နှင့်ဆုချချင်သောသူများဖြစ်သည်။
သင်၏ Web Application ကိုသစ်ပင်တစ်ပင်အဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့ပါကသင်၏ UI ကိုသင်၏အရွက်များ၊ API ကို သင်၏အမြစ်အဖြစ်။ အရွက်များသည်လိုအပ်ပြီးလှပသောအရာဖြစ်သော်လည်းနက်ရှိုင်းသောအမြစ်တွယ်မှုရှိခြင်းဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးအနာဂတ်ကိုလုံခြုံစေလိမ့်မည်။
ဧပြီ 21, 2007 မှာ 5: 19 pm တွင်
Admittedly, keeping our back-end operations smooth and improving the website take precedence but, fear not, our API users များမှာ important to us. Glad to see your widget displaying the rank again, I think that validates that the fix made to the API took effect 🙂
ဧပြီ 21, 2007 မှာ 6: 01 pm တွင်